DF oo war ka soo saartay dadka ku go’doonsan Ukraine | KEYDMEDIA ENGLISH
DF oo war ka soo saartay dadka ku go’doonsan Ukraine
Wasaaradda arrimaha dibadda Xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa baaq deg deg ah u dirtay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go’doonsan magaalooyin kuyaalla dalka Ukraine.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqday in ay ku howllan tahay diyaarinta hababka suurtagalka ah, ee la doonayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Ukraine, loogu daabulo waddamada Biljimka iyo Jarmalka.
War ka soo baxay Wasaradda Arimaha Dibadda, ayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Ukraine, loogu baaqay in ay la xiriiraan Safaaradaha DF ku leedahay Brussels iyo Berlimka, si ay u helaan, adeegyo doowladeed oo daabuliddu ugu horreyso.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay ku howlan tahay diyaarinta waddooyinka suurtagalka ah ee lagaga daadgurayn karo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Ukraine iyo bixinta adeegyadooda qunsuliyadeed ee muhiimka ah”. Ayaa lagu yiri warka Dowladda.
Wasaaradda Arimaha Dibadda, waxa ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ugu baaqday in muujiyaan feejignaan aad u sarraysa, sidoo kale na ilaashadaan dokumentiyada aqoonsigooda, maadaama xiisadda ka dhalatay duullaanka Ruushka ee Ukraine, ay cirka isku sii shareereyso.
Ciidamada Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya magaalada Kyiv, iyadoo duulaanka Moscow ee Ukraine uu weli socdo, halka, Madaxweynaha dalkaas, Volodymyr Zelenskyy, uu sheegay in ilaa hadda la dilay 137 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah.
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ilaa 100,000 oo reer Ukraine ah ay barokaceen, iyadoo kumanaan ay u qaxeen dalalka Yurub ee ku dhow, Quwadaha reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay cunaqabatayn ballaaran oo ay ku soo rogayaan Ruushka.
Kumanaan ka mid ah shacabka Ruushka ayaa dibadbaxyo ka dhan ah dagaalka ka dhigay magaalooyin ka tirsan dalkaasi.